Iwo metrics ekufunga nezvekutenga nekutengesa NFT - Cazoo
musha » musha » Iwo metrics ekufunga nezvekutenga nekutengesa maNFTs
Tag: Binance, denga reNFT, Mutengo wepasi, NFT, Rarity, Mikangano Yema Smart
Nguva yekuverenga: 5 minuti
Pakusarudza tenga kana kutengesa NFT iwe unofanirwa kuve nemamwe mametrics ekutanga mupfungwa kuti uone kukosha kwayo.
Ini ndinoverenga masere, masere akakosha metrics ekufunga kana ndichiongorora kukosha kwemukati kweNFT:
Unofanira kujoinha NFT kutanga kwepurojekiti kana kuti unofanira kumirira wotenga gare gare?
Ndeipi basa ringaitwe neNFTs mune yako portfolio?
3 matipi ekuvaka akabudirira NFT portfolio
NFTs dzakatora internet nedutu, uye haisi kuratidza zviratidzo zvekudzikira. Nekuwedzera kwayo mukuzivikanwa, hapana kushomeka kwemapurojekiti eNFT ari kutangwa mazuva ese.
Kusarudza kukosha chaiko kweNFT kunogona kuve kwakaoma. Nekudaro, kuti utarise zvirinani kurebesa uye kukosha kweNFT purojekiti yepodfolio yako, ini ndinofarira kuratidza kuti kune akakosha metrics anogona kubatsira kutungamira chirongwa chekudyara. kutenga uye kutengeswa kweNFTs munzira iri nani.
Munzvimbo yeNFT, mutengo wepasi ndiwo wakaderera mutengo weNFT mukati mechirongwa cheNFT.
"Kutenga pasi", saka kutenga pasi, kunoonekwa seyakanaka yekutanga nzira, sezvo iri nzvimbo inosvikika yekupinda kune vatsva vanopinda muchirongwa cheNFT .. mutengo uchave wakaderera.
Mutengo wepasi ndiyo yakanaka metric yekuongorora kuti chirongwa cheNFT chakatambirwa sei nenharaunda. Sezvo kudiwa kunowedzera, mutengo wakaderera uchakwira.
Saka, kana iwe ukatenga iyo yakachipa yeNFT muunganidzwa uine tarisiro yekuti ichave yakakurumbira, unogona kuzotengesazve NFT kana mutengo wepasi wakakwira.
Chinangwa chakanaka ndechekutsvaga purojekiti inoenzanisa kukosha kwepamusoro uye kuwanikwa. Nepo mapurojekiti ane mitengo yakakwira akakosha zvakanyanya, akanyanya kuomera vatengesi vadiki kuwana.
Iko "artistic" kukosha kweNFTs
Mutengo weNFT nemutengo wepamusoro-soro mukuunganidzwa kana mutengo wepamusoro wakatengeserwa NFT.
Kutenga mutengo wepamusoro unogona kutorwa senjodzi huru, mubairo wepamusoro NFT wekutengesa zano.
Kana iwe uchida kushandisa mari yakawanda paNFTs, edza kutenga sirin's NFTs, iyo iri mutengo wavo wepamusoro. Izvi zvinowanzova zvisingawanzo uye zvakakurumbira zvinhu zvedhijitari zvinotengeswa nemitengo yepamusoro.
Kana kudiwa kwepurojekiti kuchiwedzera, mutengo weSiling-mounted NFTs unogona kukwira mudenga. Asi kana purojekiti ikarasikirwa nechikumbiro chayo, vanoisa mari vari kutsvaga kutengesa vanogona kurasikirwa nekurashikirwa kukuru sezvo mvura inopera.
Iyi metric inoreva kusvika kuhuwandu hwakatengeswa uye inoratidza kudiwa kwese kweprojekiti.
Kazhinji, kuunganidzwa kwakasanganiswa kune huwandu hwehuwandu hwekutengesa.
Vhoriyamu inotengeswa chiratidzo chakanaka chekuti yakakurumbira sei muunganidzwa weNFT. Kuti muunganidzwa usvike pakakwirira, vanhu vanofanira kunge vachida kutenga nekutengesa.
Nekutarisa huwandu hwehuwandu hwakatengeswa, munhu anogona kuona zviri nyore kana chirongwa cheNFT chiri kudiwa parizvino. Iyo yakakwira vhoriyamu, iyo yakawanda mvura iyo musika unowanzo kuve. Iwe unoda musika wemvura kuitira kuti iwe ugone kupinda uye kubuda muNFT zvinzvimbo.
Mupiro unoreva nhamba yeNFTs muunganidzwa.
Chaizvoizvo, musiki wega wega weNFT anodzora basa ravo rekupa uye inflation rate.
Kupihwa kweNFT kunokanganisa kuti kukosha kwekuunganidza kunoonekwa sei. Maunganidzwa ane huwandu hwepamusoro anowanzo kuve nemutengo wakaderera wemusika weNFT yega yega. Zviunganidzo zvepasi-zvishoma zvinowanzova nemitengo yepamusoro nekuda kwekushaikwa uye kushomeka kwechidimbu chimwe nechimwe.
Il nhamba yeNFT yekutengesa inobatsira vanoisa mari kuona zvakapfuura uye zvazvino kufarira muunganidzwa weNFT.
Kana kuunganidza kweNFT kunoratidza zvakawanda zvekutengesa kwemazuva ano, zvinogona kuva chiratidzo chokuti kune kuwedzera kufarira. Zvisinei, zvakakosha kufunga nezvekutungamirirwa kwekufambisa maererano nemutengo wakaderera. Kana vazhinji vane NFT vari kutengesa uye mutengo wakaderera uri kudonha, zvinogona kuratidza kuderera kwechido kana kunyange kutya kutengesa.
Ndinofanira kuva neimwe shanduko parutivi.
La kushomeka kweNFT zvakatemwa nehunhu nehunhu izvo NFT inazvo mukati memuunganidzwa wakapihwa. Iyi metric inogona zvakare kududzira kuti zvakaoma sei kuwana chaiyo NFT.
Rarity chinzvimbo metric inobatsira vanoisa mari kuyera kukosha kweNFTs muunganidzwa wega wega.
Kutevera mutemo wekushomeka, zvisingawanzo uye mukuda maNFTs anowanzo kukwezva vatengi vakawanda uye anotengeswa nemitengo yakakwira. Pamusoro pezvo, maNFT ane chinzvimbo chepamusoro-chepamusoro anogona kuve akashongedzerwa nezvimwe zvakasiyana-siyana zveNFT zvinoshandiswa, senge mapeks makuru mumitambo yekutamba-yekuwana-yekuwana iyo vatambi vanogona kubatsirwa nayo.
MuNFT nzvimbo, provenance inogona kutsanangurwa se nhoroondo yemuridzi kuseri kweNFT kutanga kubva kwayakabva.
Provenance ndiyo yakakosha metric inoshandiswa kuongorora NFTs nekuti inokutendera iwe kuti uone shanduko muruzivo rwevaridzi mukati me blockchain. Mari yako inodzivirirwa nekuti yekutanga chete ndiyo inogona kurondwa kudzokera kumusiki wekutanga.
Smart Contracts ndeye application kana chirongwa chinomhanya pane blockchain. Iwo chikamu chakakosha cheNFTs nekuti anoita kuti zvikwanise kutengesa kana kuendesa dhijitari asset, kuseta mari yevatambi, kubvumira vashandisi kuti vabatane mune metaverse, nezvimwe.
Zvibvumirano zveSmart zvinogona kutsanangura kodzero dzemuridzi uye mutengi. Pamwe nekuchengetedza ketani yekugovera kana nhoroondo yekutengeserana.
Panyaya yekuchengetedza cheni, izvo zvekutanga zvinodikanwa nezvibvumirano zvakangwara zvakasungirirwa kumusiki wekutanga uye mutengi. Nepo vatengi vachitora varidzi, ivo havasi ivo vane kodzero yeNFT. Kunze kwekunge chiri chikamu chemitemo yekondirakiti, kodzero yacho inoramba iri nemunyori.
Kufanana chero kumwe kudyara, NFTs inogona kuve yakakura mapotifolio diversifier.
NFTs ikirasi yemidziyo yedhijitari ine isingaperi mukana. NFTs inogona kuvhura magonhi kune mamwe mikana mukati memetaverse, pamwe nekupa kuratidzwa kune nyika ye blockchain.
Zvisinei, yeuka kuti hazvisi zvose zvinopenya idhaimani. Nemapurojekiti mazhinji eNFT ari kuitika mazuva ese, kubudirira kuita yako tsvagiridzo uye kuita sarudzo ine ruzivo kwakakosha.
Usaise mazai ako ose mubasket rimwe. Haasi ese maNFT achabudirira. Kusiyanisa portfolio yako kunogona kuvandudza mikana yako yekuita mari inobudirira.
Usashandisa zvakawanda kupfuura zvaungarasikirwa nazvo
Zvinokurudzirwa kuti usashandise zvinopfuura 10-20% yemutengo wakazara wepodfolio yako pakudyara kamwe chete. NFTs hazvina mutsauko.
Shingairira munharaunda yeNFT
Chero chipi nechipi chirongwa cheNFT chauri kufarira, chakakodzera kuve unoshanda munharaunda. Kuita tsvakiridzo yako wega kunobatsira kusiyanisa mari yakanaka kubva kune inogona kuve scam.
Kukosha kweNFTs kunonyanya kugadziriswa nemasimba emusika, uye hazvibviri kunyatsofanotaura nezveramangwana reNFT yenyika.
Nekudaro, zvinokwanisika kuwedzera mikana yekubudirira nekuita tsvakiridzo yemusika yakakodzera uye kushandisa metrics anoonekwa pamusoro. Vashandise kuongorora zvirinani uye kufamba muNFT nzvimbo.
Nyaya yapfuuraIwo gumi akanakisa ekuvanzika mari uye maitiro ekuatenga
Nyaya inoteveraNdeapi matsva eNFT akaunganidzwa ari kuuya muna 2022?